GRAPE KINGLET: SHARAXAAD KALA DUWAN, CUDURRADA IYO CAYAYAANKA, SAWIR - BEERTA
Jilid yar yar oo jilicsan - noocyada canabka ee Korolek
Kala duwanaantan waxay noqon doontaa mid dhab ah oo loogu talagalay dadka jecel khamri wanaagsan oo canab ah iyo canab leh dhadhan sharaf leh.
Run ahaantii, Kinglet waxa uu si macquul ah ugu habboon yahay wax kasta - miraayadaha musqulaha, iyo macaanka, iyo in yar oo ka mid ah dadku diidi doonaan.
Markaasaa canab ah ee canabka this yihiin kuwo aad u qurux badan - xumay, kuwa yaryar.
Boqorka kala duwan - aad u da 'yar. Isaga waxa loola jeedaa foomamka guud oo leh Bisaylkiisa-weyn hore. Harvest ayaa laga saari karaa horraanta Agoosto. Noocyada caalamiga ah waxaa ka mid ah Alexander, Druzhba iyo Krasa Balki.
Sababtoo ah dhadhanka musqulaha ee hodanka ah, winemakers ayaa aad u jecel khamriga, oo loo isticmaalo isku dhafka khamri qaali ah. Sidoo kale caanaha, macmacaanka ama miro cusub. Sida laysku daro, waxaa la isticmaalaa Korolka, Alpha, Asya iyo Romeo.
Sida laga soo xigtay dib u eegista ee bannaanka, waxay qaadaa kaydinta iyo gaadiidka si aad u wanaagsan, waxaa u yaraaday. Waxay leedahay dalab weyn oo macaamiisha ah sababtoo ah kooxo aad u qurxoon, macaan iyo hodan, muujinaya dhadhanka.
Sharaxaad ka mid ah noocyada kala duwan ee canab Korolek
Buundooyinka oo leh awood koritaanka weyn. Qado qiyaaso yar, miisaankoodu yahay ilaa 1 kg, shinni-qaabeeya, dabacsan, marmarka qaarkood. Ma jirin wax dhaawac ah.
Ubaxa Dhaqdhaqaaq ahaan dumarka - xitaa ilaha rasmiga ah waxay qori doonaan qiyaasta oboyopost, tani waa qalad iyo qofka asaliga ah waa uu ku raacsan yahay. Wuxuu u eg yahay Ruta ama Red Delight, wuxuu u baahan yahay pollinators.
Berry ballaaran, qiyaastii 12 g, oval, dheer, laga bilaabo cagaar guduud ah ilaa casaan qoto dheer. Maqaarku waa mid qaro weyn, halkii aad u weyn, la cuni karo.
Laalaabka juicy, cufan, macaan, oo leh carafo qurxoon oo hodan ah iyo dhameystirta asalka ah leh strawberry iyo qora casaan.
In berry waxaa jira 2-3 abuurka yar yar. Wine brine, awood leh. Leaves cagaaran dhalaalaya, cabir dhexdhexaad ah, wadnaha-qaabeeya, wax yar ka jar. Caleemaha waa madow, oo leh moodh casaan mugdi ah.
Iyada oo canab "King" dheeraad ah ayaa laga heli karaa sawirka hoose:
Kinglet - Gaadiidka cusub ee Hybrid breeder E.G. Pavlovsky. "Waalidiinta" - Talisman iyo Tason (Gobolka Kherson). Hawlgalku wuxuu ahaa in la keeno qoyaan, taas oo aan noqon laheyn mid u nugul kuwa kale oo badan, waxaana la heli karaa xitaa beeralayda gobolladaas oo ay roobabku aad u adag yihiin.
Dhibaatada ka timaada baaritaannada iyo dib u eegista beeralayda, noocyada kala duwan ayaa weli ka baqaya qabow, sidaas darteed natiijada caabbinta barafowga sida noocyada dheeraadka ah ee dheeraadka ah, Krasa Sever, Alex aan la gaari karin sababtoo ah kala duwanaanshaheeda ayaa si aad ah u korodhay waqooyiga Ukraine iyo Krasnodar Territory.
Dhanka kale, waxay u egtahay "waalid" - Tasona, iyada oo aan haysan, nasiib wanaag, xanuun badan. Canabku waa barafoobid - illaa -25 degrees Celsius, ku dhowaad la isku halleyn karo.
Aad u deggan si loo ciribtiro, caleemo qafiif ah, oo wax yar ka hooseeya - phylloxera. Maaddada sonkorta waa 19-21%.
La qabsashada dhibaatada leh ee kaydka. Xididdu waa mid dhexdhexaad ah, maadaama ay kala duwan tahay midab-takoorka xaaladaha cimilada, cabsida roobka iyo roobabka guga.
Dhamaan dhererka dhererka oo dhan. Waa suurtagal in aan si daacadnimo ah wax uga sheegin sifooyinka kale - noocyada kala duwan ayaa lagu tijaabiyay Belarus.
Wuxuu u baahan yahay hoy khasab ah bilaha jiilaalka. Caleemaha iyo caleemaha dheeraadka ah waxay u baahan yihiin in la gooyo, si caadi ah ilaa 45 indho beertid.
Kinglet ma ka cabsanayaan fangaskaoo tanuna waa mid aan la koobi karin. Isaga xitaa xitaa cabsida, laakiin noocyo u adkaysta shimbiraha weli lama siin. Sidaa darteed, shimbiraha ayaa ilaalin doona xayndaabka mesh, taas oo caqabad ku noqon karta Ptah, laakiin maaha dabin.
Kansarka bakteeriyada. Si dhif ah, laakiin weli weerarkan ayaa ku dhufan kara King.
Sidaa darteed, baadiyaha waa in la khafiifiyo, bacrimiyey, si taxaddar leh leh geedo - wax kasta oo nabarka ama xoqan on jilif waxay noqon kartaa "aasaaska" for forexology.
Dhirta cayayaanka weli ma bartay si ay u bogsiiyaan - oo kaliya si ay u baxaan. Si loo ilaaliyo dhirta cudurada sida anthracnose, chlorosis, oidium iyo caarada, tallaabooyin ka hortag ah waa in la qaataa si habboon. Ku saabsan iyaga waxaad ka akhrisan kartaa faahfaahin ku saabsan maaddooyinka ku habboon.
Cadaawe kale ayaa is-sheegi kara - phylloxera. Sida loola macaamili karo waa mid aad u daran, maadaama ay halis u tahay canabkeeda, laakiin waxtar leh ayaa ku buufinaya aaladda carbon disulfide.
Waxaa intaa dheer, haddii aad sameysid qadar yar oo ah carbon disulfide yaryar, ma jiri doonto wax macne ah oo ka yimaada daaweynahan.
Beeraleydu waxaa lagula talinayaa inayan hoos u dhigin 80 jj. halkii mitir labajibbaaran.
Canabku kuma faani karno kooxo waaweyn, ama dhalidda sare, iyo caabbinta barafku wali waa su'aal. Bixiyo noocyo sarreysa leh Podarok Magarach, Jubilee of Kherson Summer Resident iyo Memory Dombkovskaya leeyihiin faa'iidooyinkooda iyo faa'iido darrida.
Laakiin isagu kama baqan karo, iyo ka ilaalinta phylloxera iyo daryeelka waa qiimo aad u yar oo ay ku bixiyaan canabkiina dhadhan fiican leh oo udgoon leh, bouquet kudheer ah oo aad adagtahay.